TRUTH AND PEACE: 2008
ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေတုံးက လေဘေးဒဏ်ကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တတ်နိုင်သလောက်
ဆုတောင်းတာလေးတွေ၊မေတ္တာပို့တာတွေကို သေသေချာချာလုပ်နေရင်း တွေးမိတယ် ဘာလဲဆိုတော့ သီလ
ကောင်းလေ မေတ္တာပို့တာပိုကောင်းလေ လို့ သိရ ဖတ်ရသင်ခဲ့ရပါတယ် ဒီတော့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတွေမှာ
တကယ်တန်းထိမ်းသိမ်းနိင်ဖို့ကတဖက်သားအပေါ်ကိုတကယ်တန်းကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုကိုယ်ချင်းစာတရားမဲ့နေသမျှတော့ကျနော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့သံသရာထွက်လမ်းနဲ့ဘ၀လွပ်မြှောက်ရေးဟာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး သီလ ဆိုတာအရမ်းနက်နဲပြီးကျယ်ပျံ့လွန်းတဲ့တရားပါ ထိမ်းနိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ် ထိမ်းနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရပါ့မယ်၊သစ္စာဆိုရဲသောသီလဟာ၊ဘ၀လွပ်မြှောက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့ပါ၊ဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့သီလဖြစ်ဖို့ကလည်းကိုယ်ချင်းစာတရားဟာနှလုံးသားမှာကိန်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်၊တကယ်တမ်းကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီဆိုရင်လည်း၊နှလုံးသားမှာအများအတွက်ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့စိတ်ဟာလုပ်ယူဖန်တီးဟန်ဆောင်မှု
သီလတရား ခဏထား ကျနော့်အတွက်မြင့်လွန်းတယ်။
ပညာတရား ကော မစဉ်းစားရဲတော့ဘူး…လေ
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 30.5.08 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 26.5.080ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 13.5.08 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 2.5.08 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
တနေ့က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားတယ် ဒီဆိုင်လေးကထိုင်နေကျ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေဆုံနေကျလေ
ဒီဆိုင်လေးမှာပဲ တောအကြောင်းတောင်အကြောင်း ပြီးတော့လူတွေအကြောင်းပြောရင်း သတင်းပုလင်းတွေ
ပြောနေရင်းက တဖက်ဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ ခလေးတွေပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့ ဒီစာလေးကိုရေးဖြစ်တယ်
မေးလိုက်တဲ့ကောင်လေးက အသက်နှစ်ဆယ်လောက် ရုပ်ကချောချောလေး ကိုရီးယားမင်းသားစတိုင်လေး
ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ကောင်လေးကလည်း ခုနကမေးတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ရွယ်တူလေးတွေ တကယ့်မင်းသားလေးလို
မေးစရာလေးတွေ၊ပြီးတော့ ကိုယ့်စကာကို ကိုယ်တာဝန်ယူရဲသောသတ္တိ ရှိသေးလား? မတွေးချင်တော့ပါ။
ဒီအချေင်သမားစိတ်နဲ့ ဘ၀ကိုတည်ဆောက်မှာလား အလားကားရရင် ဘာမဆိုယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဘ၀ကို
ရပ်မှာလား? ကိုငှက်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်သတိရရင်း ရင်ထဲကငြီးဖြစ်တယ်` စိတ်ဓာတ်ကင်ဆာ´
ခဏလေးရပ်ပြီးတော့တွေးမိတယ်….အချောင်သမားစိတ်တွယ်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ် ဘာနဲ့သတ်မလဲဆိုတာကိုပါ
ညီလေးတို့…ငါတို့စိတ်တွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အချောင်သမားပိုးကို ယောက်ျားကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ ဆေးနဲ့
သတ်ပစ်ပါ…တကယ်တော့အလကားကရတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှဟာ အကြွေးပဲ အခုမဆပ်ရင်သံသရာမှာပြန်
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ယော်ကျားကောင်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်သင့်တယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့
ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်တို့၊မိးတုတ်သခင်သိမ်းမောင်ကြီးတို့လို ယောက်ျားမြတ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်
`ဘဘဦးရွှေအောင်ပြောတာကို..ပြန်ပြီးပြောရရင်`လောကမှာအနိုင်မဲ့ ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓကိုအ
ဒီစကားကိ ဒီခလေးတွေကိုပြန်မပြောဖြစ်ပေမဲ့ ပြန်လည်ကြားရောင်နေရင်း…..ု
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 6.4.083ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊